နယ်စပ်နေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပိုသတိထားစရာဖြစ်လာတယ်လို့ ဆို
7 ธ.ค. 2562 - 14:52 น.
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အေအေစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ ဇနီးနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးနှစ်ဦးကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးလိုက်တာဟာ ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။
ဒီမတိုင်ခင်က စင်ကာပူမှာ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ကို ထောက်ခံအားပေးတယ်ဆိုပြီး ရခိုင်အသင်း ခေါင်းဆောင် တွေကို စင်ကာပူအစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့ခဲ့ပြီး မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကလေဆိပ်မှာ ဖမ်းဆီးခဲ့တာရှိထားပါတယ်။ စင်ကာပူဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူအင်အားစုတွေ အခြေစိုက်လှုပ်ရှားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သလို နယ်မြေအနေအထားအရလည်း ဆက်စပ်မှုမရှိတဲ့အတွက် ဒီလိုအစဉ်အလာရှိမထားပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူတွေ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ အခြေချလှုပ်ရှားတဲ့အစဉ်အလာရှိထားပြီး ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကို ရာဇဝတ်မှုနဲ့မဟုတ်ဘဲ ဖမ်းဆီးပြီး မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဆီပြန်ပို့တာတော့ သိပ်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိဘူးလို့ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူအချို့က မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS)၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) စတဲ့အဖွဲ့က ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေဝင်ထွက်သွားလာတာရှိပေမယ့်အခုလို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးတာမျိုး မရှိထားပါဘူး။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ ဇနီးနဲ့ သားသမီး ၂ ဦးကို မြန်မာဘက်က လက်လွှဲယူဖို့ စီစဉ်နေ
လက်ရှိမှာလည်း အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုကို မြန်မာဘက်ပြန်မပို့ဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေရှိထားပြီး ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်က ပြန်ပို့မယ့်အစီအစဉ်လည်း ပျက်သွားတဲ့အတွက် ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေကို အရေးတယူစဉ်းစားနေသလားဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ နေထိုင်လှုပ်ရှားတဲ့အစဉ်အလာ ရှိထားပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မိသားစုကို မြန်မာအစိုးရရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာဟာ ထိုင်းမြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးပိုနီးလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်လို့ ISP Myanmar မြန်မာ့မဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒလေ့လာရေး အင်စတီကျု့က ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"လူသားချင်းစာနာမှုရှုထောင့်ကကြည့်ရင် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် စစ်တိုက်နေကြတာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့။ အဲဒီ လိုအပြစ်မရှိတဲ့မိသားစုတွေကို ဖမ်းတယ်ဆီးတယ်ဆိုတာတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်" လို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနေကြာတဲ့ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ပြောပါတယ်။
နယ်စပ်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ် သက်ရောက်မှု
ထိုင်းနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဝရမ်းပြေး အဖြစ်ကြေညာထားတဲ့ မိုးထိမိုးမိသတ္တု တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးစိုးထွန်းရှိန်ကို ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလက ဖမ်းဆီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ရှိထားပါတယ်။
အရင်အစိုးရလက်ထက်ရောအခု အစိုးရလက်ထက်မှာပါ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့တွေ ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို အခု အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့မိသားစု အဖမ်းခံရတဲ့ ချင်းမိုင်မှာ အများဆုံး ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ချင်းမိုင်မှာ အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာ မြန်မာအစိုးရ ဘက်က တားမြစ်တဲ့ကိစ္စတချို့လည်း ရှိဖူးတယ်လို့ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ဥပမာပေးပါတယ်။
အခု အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုကို မြန်မာဘက် ထိုင်းက ပြန်လွှဲမလွှဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးအောင်သူငြိမ်းက
"တစ်ခါတလေလည်း ပြန်လွှဲပါတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း ထိုင်းအစိုးရက မလွှဲဘဲ သူ့နိုင်ငံရေးကိစ္စပဲ သူကြည့်ပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအပစ်ရပ်လက်မှတ်မထိုးရသေးဘဲ တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ တခြား တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာ အနည်းနဲ့အများ သက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ဆိုပါတယ်။
"အခြေအနေက နည်းနည်းပိုကျပ်လာတာပေါ့။ ပိုပြီးတော့လည်း သတိထားရမယ့် အနေအထားရှိလာမယ် ထင်ပါတယ်"
ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနတွေကို မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တွေမှာ ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ယခင် က မူးယစ်ဆေးဝါးတရားခံတွေကိုပဲ အဖမ်းအဆီးများတာကနေ အခု ရာဇဝတ်မှုတရားခံတွေကိုပါ လွှဲပြောင်း ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာနေတယ်လို့ တာချီလိတ်မြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်တင့်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုခင်းဌာနတွေလည်း ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ ထားလာပြီ။ နယ်စပ်ဖြတ် ကျော်မှုခင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ပဲ ဒီလိုဆောင်ရွက်တယ်လို့တော့ မြင်တယ်" လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအများဆုံးနေထိုင်ရာဒေသလည်း ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပရာနေရာလည်းဖြစ်တဲ့ ချင်းမိုင်မှာ ခုလို အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုဝင်တွေ ဖမ်းခံရတာ တော်တော် ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ ဦးခင်မောင်တင့်က ပြောပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်က ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုး ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းအထိ မရှိသေးပါဘူး။
မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်း ထုတ်ပြန်ပြောကြားတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေကြားမှာတော့ အေအေဟာ လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ အရပ်သားအစိုးဝန်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီးပြီး သုံ့ပန်း လဲလှယ်ရေး တောင်းဆိုထားတဲ့အပေါ် တပ်မတော်က ငြင်းဆိုထားပြီး ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းပုံစံမဟုတ်ဘဲ ရာဇဝတ်မှုဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ထိုင်းအစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းထားလို့ ခုလို အရေးယူတာမျိုးဖြစ်လာတာလား ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ထိုင်းဘက်က စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်လို့ အဖြေမထွက်လာသေးတဲ့အတွက် မြန်မာဘက်ကို ပြန်လွှဲပေး မပေး ဆိုတာ မှတ်ချက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ ဦးခင်မောင်တင့်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့မြင်တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
စစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုကို ထိုင်းဘက်ကနေ မြန်မာကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်မှာလွှဲပြောင်းဖို့လုပ်ထားပေမယ့် အစီ အစဉ်ပျက်သွားတယ်လို့သာသိရပြီး ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့ ခုထိမသိရသေးဘူးလို့ ဦးခင်မောင်တင့်က ဆက်ပြောပါတယ်။
ကြားထဲမှာ လူမသိသူမသိ လွှဲပြောင်းမှာစိုးလို့ ဒီအခြေအနေကို တာချီလိတ်က သတင်း မီဒီယာတွေ အပါအဝင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ် လို့ သူက ပြောပါတယ်။
"ပထမ ကျွန်တော်တို့သိထားတာက ချင်းရိုင်ကနေ မယ်ဆိုင်ကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ပို့လာမယ်။ မယ်ဆိုင်ကနေ တာချီလိတ်ကို လွှဲမယ်ပေါ့။ အဲဒီလို စီစဉ်ထားတာ။ နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ပျက်သွားတယ်။ ဒီဘက်က အာဏာပိုင်တွေပြောတာက မလွှဲဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲပြောတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယူဆတာတော့ လွှဲတာ တော့လွှဲမယ်။ ဒါပေမဲ့ အရပ်သားတွေပြည်သူတွေမသိအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတော့ ရှိနေတယ်" လို့ ဦးခင်မောင်တင့်က ပြောပါတယ်။
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အေအေ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ ဇနီး မနှင်းဇာဖြူနဲ့ သားသမီးနှစ်ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရက လူ့အခွင့်အရေးအရ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း အေအေပြော ခွင့်ရသူ ဦးခိုင်သုခက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မနှင်းဇာဖြူဟာ တစ်နှစ်ကျော် အရွယ်သားနဲ့အတူ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ထိုင်းနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုင်းမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် သမီး မစောပြည့်ရှင်နဲ့ သူ့ရဲ့ နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာကို သက်တမ်းလာတိုးချိန် ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်မှာ ချင်းမိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေက ထိန်းသိမ်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက မနှင်းဇာဖြူရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်း ထားတယ်လို့ ထိုင်းဘက်ကို အကြောင်းကြား လာတာကြောင့် တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှု(illegal entry)နဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိတယ်လို့ ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သူ့ကို စစ်ဆေးနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနကို အဲဒီအရာရှိက ပြောကြားထားပါတယ်။
"ပတ်ပို့စ်သက်တမ်းတိုးရင်းကနေ ဖမ်းတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီပတ်ပို့စ်က ဘယ်ကထွက်လဲဆို ကျွန်တော်တို့ ဒီမြန်မာပြည်ကပဲ ထွက်တာလေ။ အဲဒီ တုန်းက ဘာလို့မစစ်လဲဆိုတာ မေးစရာဖြစ်လာတယ်" လို့ ဦးခင်မောင်တင့်က ပြောပါတယ်။
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကူမင်းမှာ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်တွေ တွေ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပြီး တွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ ဦးခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
"အဓိကကတော့ ခရီးသွားလာလို့မရအောင်၊ သူ့ကလေးတွေ စာသင်ခွင့်ပညာသင်ကြားခွင့်မရအောင် ဒုက္ခပေးတဲ့သဘောပဲ။ ဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်က တရားဝင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ဟာ။ ဒါနဲ့ သွားလာနေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီ။ အခုလို အဲဒီပတ်စ်ပို့တင်လာရင် ဖမ်းပေးပါဆိုပြီး ဗမာအစိုးရက လုပ်တာ။ ကျွန်တော်တို့ ULA(ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်)အဖွဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ဆန် ပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ ဗမာအစိုးရက လုပ်နေတာ အတော်ကြာပြီ" လို့ သူကပြောပါတယ်။
NLD အမတ်ဦးဝှေ့တင်းပြန်လွတ်ရေးအဆို လွှတ်တော်မှာ တင်တာ လမ်းကြောင်းလွဲနေသလား
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံစကားပြောနေချိန်မှာ အခုလုပ်ရပ်ဟာ ယုံကြည်မှုပိုပျက်ပြားစေပြီး နောက်ဆက်တွဲအာဃာတနဲ့အငြှိုးတွေ တိုးပွားလာတဲ့အခါ ပြဿနာကို ပိုဆိုးရွားသွားစေမှာဖြစ်လို့ ဗမာအစိုးရက ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်လုပ်သင့်တယ်လို့ ဦးခိုင်သုခက ဆက်ပြောပါတယ်။
ဒီလို စစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုကို ဖမ်းထားတဲ့အတွက် အေအေဘက်က ဖမ်းထားတဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမတ် ဦးဝှေ့တင်းအပါအဝင် ဓားစားခံတွေ လွှတ် ပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ အလျော့အတင်းလုပ်ဖို့တော့ မရှိဘူးလို့ ဦးခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။
အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ ညီ၊ ညီမနဲ့ ယောက်ဖ၊ ဒါ့အပြင် စင်ကာပူက အေအေထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့ ရခိုင်အသင်းခေါင်းဆောင်တွေကို လက်ရှိမှာ အစိုးရက ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ နယ်စပ်နေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပိုသတိထားစရာဖြစ်လာတယ်လို့ ဆို